Saịtị cha cha nke Azerbaijani | Koodu ego cha cha n'ịntanetị
(522 votes, nkezi: 5.00 si 5)
Loading ... Otu n'ime mba kachasị mma maka ntụrụndụ bụ Azerbaijan. Onye ọ bụla na-eme njem nleta nwere ike ịchọta ebe a maka ntụrụndụ na ebe ị ga-eleta. Azerbaijan nwere ihu igwe dị nro, ihu igwe dị mma, osimiri dị nro nke Oké Osimiri Caspian, nke ga-adịrị ndị okenye na ụmụaka mma. Maka ndị maara akụkọ ihe mere eme na ihe owuwu na mba a, enwere ọtụtụ nlegharị anya bara uru, dịka ebe ewusiri ike, ụlọ, ebe nkwụsị nke Okporo Silzọ Silk Ukwu. Maka ndị na-eto eto Azerbaijan na-enye ọtụtụ ụdị ntụrụndụ dị iche iche, dịka ụlọ nri, ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọcụlubụ. Ebe pụrụ iche na ụlọ ọrụ ntụrụndụ nke Azerbaijan nwere ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na casinos. Enweghị ọtụtụ ndị dị otú ahụ na mba ahụ, na njikọta na iwu machibidoro ịgba chaa chaa, mana ha dị adị ma na-arụsi ọrụ ike. Imirikiti n’ime ha na-enye casinos dị ọnụ ala ma ọ bụ igwe oghere. N'ebe a, ị nwere ike igwu igwe kacha mma maka n'efu na enweghị ego itinye ego.
Imirikiti ụlọ ọrụ ntụrụndụ na ịgba chaa chaa na Azerbaijan dị n'isi obodo obodo ahụ - obodo Baku. Gamblinglọ ịgba chaa chaa niile dị na Baku na n’ozuzu na mba ahụ nwere oke iwu na omume ha site na iwu nke steeti, mana ha na-ewu ewu ma na-ewu ewu ma ndị obodo ma n’etiti ndị ọbịa. Maka oge mbụ ụlọ ịgba chaa chaa na casinos n'ụdị nke ha pụtara ugbu a na Azerbaijan na 20s nke narị afọ nke 20, na nke a n'agbanyeghị na ọ bụ oge Soviet. Mana ka ọ na-erule 1928, emechila ha niile. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ụlọ ịgba chaa chaa dị n'okpuru ala pụtara, ihe ka ukwuu n'ime ya dị na mpaghara Baku.
Lọ ọrụ ịgba chaa chaa ọhụrụ nke ụdị iwu kwadoro bidoro mepee mgbe 1991 gachara USSR. Site n'otu oge ahụ na mba ahụ ịnabata iwu machibidoro ịgba chaa chaa. E mere ka mmegharị na mmegharị nke iwu ọhụrụ ahụ ruo 1991. Ọ bụ n'oge ahụ ka amachibidoro nzukọ nke cha cha kpamkpam. Na ọnụ ọgụgụ nke kwere omume naanị mba lọtrị na egwuregwu ịkụ nzọ dara. Ya mere, ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ ndị nke narị afọ gara aga, azụmahịa ịgba chaa chaa nke Azerbaijan laghachiri na steeti Soviet Union. Ruo taa, ọ na-adị na steeti a, mana esemokwu nke iwu dị nro na casinos na ịgba chaa chaa na Azerbaijan ka na-ekwurịtakarị banyere ya.
Azerbaijan bụ obodo dị n’agbata Europe na Eshia, ebe ọdịnala dị nso na Turkish, mana n’otu oge ahụ mmetụta nke Peasia na Russia. Nchikota a mere Azerbaijan ka ọ bụrụ mba pụrụ iche nwere oke nketa akụkọ ihe mere eme.
Ndụmọdụ site na CasinoToplists na ịhọrọ cha cha a pụrụ ịdabere na ya - usoro ntụpụ ụkwụ;
Azerbaijan - mpaghara ebe obibi;
Kedu ihe na-echere ndị Azerbaijan ndị na-egwu ntụrụndụ na obi ụtọ nke oge a? Enwere m ike igwu chaa chaa n'ịntanetị ebe a? CasinoToplists ga-anwa ịza ajụjụ ndị a na ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ.
Iwu nke Azerbaijan gbasara ịgba chaa chaa - ozi gbasara akụkọ
Akụkọ banyere ịgba chaa chaa na Azerbaijan na-adabere na akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ n'onwe ya. Yabụ n'oge Soviet Union, Azerbaijan nọ n'okpuru iwu nke Soviet Union kpamkpam - na mpaghara ya steeti steeti nwere naanị lọtrị, ịgba chaa chaa dịkwa naanị ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị n'okpuruala. Republic of Azerbaijan nwere nnwere onwe na USSR na August 30, 1991 ma kemgbe ahụ ọ mepụtala amụma nke ya gbasara ịgba chaa chaa. Isi ihe nke mmepe a ka anyị gosiputara na okpokoro.
1991 Casinolọ cha cha mbụ "Admiral Eka" mepere na nkwari akụ "Azerbaijan" na Baku. N'otu afọ ahụ, e mepere cha cha "Moscow". N'oge a, a naghị anabata ụkpụrụ ọ bụla.
1992 Iwu Nke 258-XII "Na Taxtụ Isi Ego na Tydị ofdị Enweta nke oflọ Ọrụ Iwu na Republic of Azerbaijan". Dị ka ya si kwuo, ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa ga-akwụ ụtụ nke 70% nke uru.
1993 Iwu Nke 40.5 "Na Entzụ ahịa". Ejikọtara azụmaahịa ịgba chaa chaa na ọrụ azụmahịa yana maka imeghe ya otu ngwungwu nke akwụkwọ achọrọ. Achọrọ ndebanye aha na steeti na Mịnịstrị nke Ikpe Ziri Ezi.
1994 - 1996 Ọtụtụ nnukwu casinos na-emeghe na mba ahụ, n'etiti ha cha cha "Oscar", ụlọ ịgba cha cha na Grand Hotel Euryore - ụlọ ọrụ Azerbaijani-Turkish nke jikọrọ aka na nsonye nke onye ọchụnta ego Omar Topal.
1996 Emere mmeghari na Iwu ahụ “Na Ọrụ Ndị Azụmaahịa, ugbu a, ekenyela ọrụ maka nzukọ na ndozi nke casinos na ịsọ asọ na otu dị iche iche.
1997 Gburugburu cha cha, ọtụtụ asịrị na-egosi na Grand Hotel Eurore nkwari akụ, nke nwa nwoke nke onye isi ala na Azerbaijani Minister nke mba ọzọ dị na ya. Nke a na - eduga na mmeghachi omume na - adịghị mma nke Onye isi ala Heydar Aliyev, na, n'ihi ya, mmalite nke iwu iji mee ka njikwa siri ike na mpaghara egwuregwu.
1999 Usoro iwu obodo na-amachibido ịgba chaa chaa na iwu. Naanị steeti lọtrị ka iwu kwadoro.
2004 Iwu Nke 594-IG "Na Lottery". Na-eguzobe iwu maka ịhazi na iduzi lọtrị. Hapụ ekpochapụ.
2013 Akwụsịla ụtụ isi ndị mmadụ n'otu n'otu maka mmeri sitere na ịkụ nzọ egwuregwu. Ọrụ mmepe nke ịkụ nzọ egwuregwu.
2016 Taxtụ isi na mmeri sitere na ngụkọta egwuregwu bụ 10%. Ebumnuche nke okike nke Kọmitii Ego Ego, nke ga-agụnye ndị nnọchi anya nke Mịnịstrị Ego, Central Bank na Chamber maka Nlekọta nke Ahịa Ego. Onye omebe iwu omebe iwu nke MP Gudrat Hasanguliyev na ịgba akwụkwọ ịgba chaa chaa na mba ahụ na ebumnuche nke ịdọrọ njem nleta na-atụle ndị omeiwu Azerbaijani.
Gba chaa chaa n'ịntanetị na ókèala Azerbaijan ọ ga-ekwe omume, ọ na-abụkarị ndị ọrụ mba ọzọ. Iwu machibidoro ụdị egwuregwu ahụ ebe ahụ. Dị ka usoro nchịkwa. Enweghị ndị na-ahụ maka iwu egwuregwu na mpaghara n'ịntanetị - iwu anaghị enye ha.
Ọ gaghị ekwe omume igwu egwuregwu ịgba chaa chaa na-adịghị n'ịntanetị ma gaa na casinos dị na Azerbaijan. Site na iwu, amachibidoro ọrụ ịgba chaa chaa niile ugbu a, ewepu ịgba ọka na lọtrị. Enweghi ugbua casinos nke steeti nyere ikike na Azerbaijan.
Nsonaazụ: na cha cha chara n'ịntanetị ị nwere ike igwu egwu na casinos ndị si mba ọzọ, na igwu egwu na cha cha chara ala ị ga-agabiga Azerbaijan. Karịsịa ewu ewu bụ cha cha cha nke Georgia, dịka onye agbata obi kacha nso.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ igwu egwu na-ahapụghị mba ahụ, mgbe ahụ i nwere ike ime ya na ụlọ ịgba chaa chaa n'onlinentanet gosipụtara na mba ọzọ. Ntụziaka anyị ga - enyere gị aka ịme usoro nke mbụ na ntụzịaka a ma gwa gị gbasara ụfọdụ nuances nke egwuregwu n'ịntanetị.
Iji malite, ị ga-achọ ntakịrị ihe ọmụma banyere Bekee, n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ casinos ọ bụla si mba ọzọ na-eji Bekee eme ihe dị ka asụsụ ha. Ọ bụrụ na ihe ọmụma abụghị nke ukwuu, mgbe ahụ ị nwere ike iji onye ntụgharị okwu na Internetntanetị.
ahụmahụ - ogologo ahịa, ka mma
Ozi kọntaktị maka nkwurịta okwu - adreesị ozi-e, ozi-e, na-arụ ọrụ nkwado ndị ahịa, nkata
Data gbasara software (sọftụwia ahụ ga-abụrịrị ndị ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi dịka Playtech, NetEnt, Microgaming, Novomatic, Play'n Go, Realtime Gaming).
Usoro ndebanye aha na saịtị - ma ịchọrọ nkwenye nke akaụntụ ahụ (n'eziokwu, ihe ndị siri ike ịchọrọ onye ọkpụkpọ - nke a bụ naanị nkwenye nke nchekwa gị, ebe ọ na-ewepu wayo na enyemaka nke bọọlụ ma gosipụta oke cha cha). Casinolọ cha cha nwere ike ịrịọ nkwenye nke njirimara (nke ziri ezi na foto ma ọ bụ nyocha nke paspọtụ, enwere ike ịkpọ oku site na njikwa cha cha). Oge a dị ezigbo iche na cha cha cha ọ bụla nwere ihe ọ chọrọ.
Ndị a bụ isi njirisi maka ịhọrọ cha cha. Na mgbakwunye, anyị na-akwado ka ị attentionaa ntị na:
Nweta usoro ịkwụ ụgwọ egwuregwu kwesịrị ekwesị (Visa, WebMoney, Yandex.Money, wdg). Usoro ndị dị otú a cha cha ọ bụla na-enye ọtụtụ ịhọrọ. Jide n'aka na ị gụrụ ọnọdụ maka ịdọrọ mmeri - nke ga-aba uru karịa gị;
Ikpochapu nke cha cha, ozi doro anya, igodo cha cha. Ikwesiri ighota ihe cha cha a na enye.
Nhọrọ nke egwuregwu - ndị ọzọ dịgasị iche iche, nke ka mma.
Anyị na-akwado ka ị buru ụzọ nwaa cha cha na ọnọdụ nnwale - egwuregwu cha cha na-adịghị akwụ ụgwọ, lelee anya wee mechaa rịa ịbanye ezigbo ego na egwuregwu ahụ. Kama ịbụ nke na-enweghị isi ga-amakwa ihe anyị nwere na sistemụ, iwu na usoro nke egwuregwu. Yabụ na bankroll gị ga-adịkwu nchebe. Nke a ga - enyere aka mee ka egwuregwu gị gbatịkwuo ma nweta site na ya kachasị ihe ụtọ.
Azerbaijan Republic bụ otu steeti dị n'akụkụ Oké Osimiri Caspian. Akụkọ ya dị puku afọ ise. Territorykèala oge a bụ akụkụ nke ọtụtụ steeti: Manna, Atropatena, Iskim, Skeet, Skif, Caucasian Albania, Arab Caliphate, Iran.
Kemgbe narị afọ nke asaa, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị bi na ya abanyela na Islam, nke kpebisiri ike ụzọ mmepe. Ejiri ala nke oge a na 7 tinyere ntoputa nke Azerbaijan Soviet Socialist Republic, nke batara na Transcaucasian Socialist Federative Soviet Republic, yana ya na USSR. Na 1920, Azerbaijan SSR ghọrọ mba nweere onwe ya. Na 1936 Azerbaijan nwere nnwere onwe nke USSR nwetara nnwere onwe.
Isi obodo nke obodo ahụ bụ obodo Baku. Asụsụ gọọmentị bụ Azerbaijani. Ndị agbata obi kacha nso: Russia, Armenia, Georgia, Nagorno-Karabakh, Iran, Turkey.
Obí nke shirvanshahs . Adreesị: Sabayil, Baku. Palacelọ obí eze a, nke e wuru site na 13th na 16th, bụ ebe obibi nke ndị isi Shirvan. Na mgbakwunye na isi ụlọ, ihe mgbagwoju ahụ gụnyere olili ozu, ụlọ alakụba nke narị afọ 15 na ụlọ ikpe Diwan Khan.
Enlọ Elu Nwa agbọghọ . Adreesị: Ogbe ndịda Baku. Nke a bụ otu n'ime akara nke Baku, nke dị n'akụkụ akụkụ nke isi obodo Icheri Sheher. Lọ elu ahụ dị n’elu nkume. Ihe omimi nke akuko ihe omuma bu ubochi ewuru ya, mana o gha atutu aka n’oge ndi Islam.
Ihe ngosi nke kapeeti Azerbaijani . Adreesị: Netchilar Ave, Baku. Nke a bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke ụwa kapeeti. Ngosipụta dị ugbu a gụnyere ihe karịrị 10 000 n'omume. Ma na ụlọ ngosi ihe nka ọ bụghị naanị kapeeti, kamakwa ọla, seramiiki, ihe ịchọ mma, uwe mba, ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe ịchọ mma. Ihe ngosi kachasị ochie malitere na narị afọ nke 15.
N'etiti Heydar Aliyev . Adreesị: Heydər Əliyev prospekti, Baku. Ogige ọdịbendị nke Baku, nke bụ ihe mgbagwoju anya dum, bụ ihe owuwu ụlọ pụrụ iche nke Zaha Hadid kere.
Akwụkwọ alakụba Bibi-Heybat . Adreesị: Bibi Heybat, Baku. Mosquelọ alakụba a, nke e wuru na 90s nke narị afọ nke 20, na-alọghachi ụlọ alakụba Bibi-Eybat nke narị afọ 13, nke ndị Bolshevik bibiri.
Ná mmalite narị afọ nke 20, Baku mepụtara 50% nke mmanụ ụwa.
N'ihe dị ka afọ 1850, ọ bụ naanị mmadụ 7,400 bi na Baku, taa, enwere nde mmadụ abụọ na 2 bi ebe ahụ. Baku bụkwa otu n’ime obodo mba ụwa kachasị na mbara ala, nihi na ebe a ka ndị mmadụ bi na mba iri asaa na abụọ bi.
Opera mbụ nke Muslim East - "Leili na Majnun" ka emere na Baku.
3.0.1 Iwu nke Azerbaijan gbasara ịgba chaa chaa - ozi gbasara akụkọ
Koodu onyinye ego cha cha nke 24vip